I-China Special 240ml I-Glass Diffuser Bottle ekhethekile efektri ne-Cork Stopper fektri nabaphakeli | Hoyer
Ibhodlela elikhethekile le-Glass Diffuser engu-240ml ekhethekile ne-Cork Stopper
Ikhwalithi ephezulu, ebonakalayo, phansi esindayo, ingilazi ehlanzekile.
Ukubukeka okuhehayo: Ukwakheka kwemfashini, kuhlale kudumile ekhaya, kulula ukuyisebenzisa futhi nokupakisha okuphephile.
Ungadinga futhi ukhokho ukufanisa leli bhodlela. I-cork yenziwa ngezinto eziphezulu ze-polymer, idlala a
indima njengendlela ejwayelekile, eqinile futhi esebenzayo yokuvikela uketshezi lwangaphakathi ukuphuma, njengabavimbeli
emabhodleleni ewayini abomvu. Ukususa isembozo kukuvumela ukuthi ufake umjovo kawoyela obalulekile ngqo ebhodleleni lengilazi ye-diffuser.
Ivolumu: 240ml / 8.2 oz
Isisindo: 300g / 0.66 iphawundi
Ukuphakama: 135mm / 5.3 inch
Ububanzi: 70mm / 2.7 inch
Umbala: kucace, ukupenda komunye umbala nakho kuyamukeleka
Ungayifaka ngokuthanda kwakho: ungashintsha iphunga libe elinye ngemuva kokuthi selisetshenzisiwe, noma usebenzise izesekeli ezahlukahlukene njengezinti zomhlanga, izimbali, itshe le-ceramic kanye nalesi sethi.
Qaphela: izesekeli ezifana namakhekhe nezinduku zomhlanga azifakwanga, uma kunesidingo, ungazithola kuwebhusayithi yethu noma uthumele uphenyo kithi ngqo. Isigaxa se-cork siyisisekelo esisezingeni likazwelonke, uma usebenzisa isilingi se-cork futhi sizwa ukuthi siqine kakhulu, lokhu kunembile ngoba kudinga ukuqina ngokwanele ukuvimbela ukuvuza. Ngiyabonga kakhulu ngokuqonda kwakho.
Ubukhulu Umthamo: 240 ml Isisindo: 300 g Ukuphakama: 135 mm ubukhulu: 70 mm IVolumu: Isisindo esingu-8.2oz: amakhilogremu angu-0.66 Ukuphakama: I-intshi engu-5.3 inches: 2.7 inch
Umbala kucace ukuphrinta noma umbala ngokwezifiso nakho kuyamukeleka
Ukuthunyelwa kokuthunyelwe Ukudweba, ukwakheka, isikrini sikasilika, ukupenda ngesifutho, ukufriza, ukubeka phansi igolide, ukubeka isiliva njll. I-logo emisiwe, ukwakheka kwe-OEM kuyatholakala.
Isampula a. amasampula esitokweni: QTY: 1-5-5cIzindleko: zinikezwe ngesihleUkuhamba: ukuqoqaIsikhathi: izinsuku ezingama-3-5 b. amasampula enziwe ngezifiso: QTY: ngokuya ngesidingo sakho Izindleko: ngokuya ngomklamo othile nomkhiqizoUkuhamba: ukuqoqa Isikhathi: ngokuya ngomklamo othize
Esedlule: Ibhodlela le-Glass Diffuser elidumile le-Round
Olandelayo: Ibhodlela le-Glass Diffuser elidumile le-100ml
Izikhonkwane eziphezulu ze-250ml High ne-Amber Glass Diffus ...